चुनाव खारेज अभियान सशक्त बन्दैछ : विप्लव, महासचिव – eratokhabar
चुनाव खारेज अभियान सशक्त बन्दैछ : विप्लव, महासचिव
ई-रातो खबर २०७४, २८ बैशाख बिहीबार ०७:५६ December 29, 2020 1843 Views
(नेकपाका महासचिव विप्लवसँग एक घण्टा अगाडि ई–रातो खबरको तर्फबाट रातोखबरका निर्देशक अनिल शर्माले लिएको अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश)
»» चुनाव खारेजको अभियान कस्तो भइरहेको छ ?
»» तपाइँका सयौँ नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका छन् त्यसको प्रतिरोध गर्ने भन्नु भएको थियो, त्यो प्रतिरोध कस्तो हुन्छ ?
»» सरकारले तपाइँका कार्यकर्तालाई देख्नासाथ समात्ने भनेको छ, यसमा तपाइँको प्रतिक्रिया के छ ?
»» गिरफ्तार परेका नेता कार्यकर्ताबारे के भन्नु हुन्छ ?
»» चुनावी गठबन्धनमा राप्रपा र एमाले, माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको गठबन्धनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
»» चुनाव खारेजको अभियानलाई क्रान्तिसँग जोड्ने भन्नुभएको छ । के भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले माथि पनि भनें हाम्रो चुनाव खारेज अभियान यो केवल चुनावसंग मात्र सम्बन्धित छैन । यसको सम्बन्ध दलाल पँुजिवादी संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने र वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रकृयासँग सम्बन्धित छ । यो चुनावको खारेजी त हो नै साथसाथै क्रान्तिकै एक अंश हो । हामी चुनाव खारेज मात्र गर्ने छैनौं कि जनताको सत्ता निर्माण पनि गर्नेछौं । जनताको चुनाव पनि गर्ने छौं ।
»» वैशाख २४ गते अन्य पार्टीबाट नेकपामा ध्रुविविकृत हुनु भयो यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
२०७४/बैशाख २८, अपरान्ह २ बजे प्रकाशित ।
चितवनमा शक्ति संघर्ष